ဘာဒရိန်းလဲမသိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » ဘာဒရိန်းလဲမသိ
ဒရိန်း ရင်ထဲမှာ ကျလိကျလိ
ဒါပဲ ဆိုလဲ ပြီးရော..အဲလေ….
ပေါက်ဖော် …..။ မူးပြီဘာတွေလာပြောနေတာလဲ…။ အိပ်နေတာမဟုတ်ဘူး…။ သွားသွား ကိုပေ ဘီယာနှစ်လုံးဝယ်လာတယ်…။ မီးဖိုထဲမှာ သွားသောက်ချေ…..။ ပြီးရင်အိပ်တော့ အပြင်ထွက်မလာနဲ့ဦး…။
ရေးထားတာ နည်းနည်းရှုပ်နေသလားလို့ ထင်ပါတယ်
” အလုပ်ကထွက်ရင် သိန်း၅၀လျှော်ရမယ်လေ၊ ငါကတော့ လျှော်ပြီးထွက်မလားလို့ ”
မဆိုင် မဆိုင် ….
တယောက်တည်း တိုင်ပတ်ရတဲ့ ကာလ ဆိုပါတော့ဗျာ …
ကျနော် ကင်မလာရှိနေရင် မသိသာပေမယ့် ကင်မလာ မရှိတော့မှ ….မရိုက်ဖြစ်တော့မှ
ဒင်းတို့ အ၀ှာကာလ ဖြစ်နေတာပါ)
အာပျိုဂျီးပိုစ့်မို့ အားနာပေမယ့် .. လိုရင်းကိုပြောရရင် natural, floral, ဒါ့ပုံသမားများအပြင် …
ကိုယ်ရေးတဲ့ စစ်စတမ်လေး ..ကိုယ့်ဆီမှာ သုံးချင်တယ် ဆိုပဲ ….
နောက်ဆို အလေးချိန်ကောင်းရင် ပိုက်ပိုက်ပိုရရိုးမှန်လို့ကတော့ ပါဖောမင့်ကိုဘေးချိတ်
သများတို့ ပွားအောင်ရေးတော့မယ် ဟေဟေ့
လိပ်ပြာတွေ ပုစဉ်းတွေ သူ့ရို့ဘာသာမိတ်လိုက်တာ ကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်သဒုံး
ရှေ့နှစ် မင်္ဂလာဆောင်ပစ်လိုက်မယ် ဟွန့် :mad:
အေးပေါ့ကွယ် … အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လ စိုက်မှပေါ့ …ဘယ့်နှယ့်
အဲလို.. လူငယ်/လူရွယ်တွေကို.. တိုက်တွန်းချင်ကြောင်း…
.. မေ့ထားလိုက်.. မေ့ထားလိုက်..
Brain ဘာလို့ ခေါ်သင့်သလဲ တွေးနေဆဲ။
အဲ့ဒါ ဘရိန်းကို ခြောက်သွားအောင် ခန်းသွားအောင် မတရားနည်းနဲ့
နွံအိုင်ထဲမှာ ဒူးခေါင်းမမြုပ်ခင် ရုံးထွက်လိုက် ၊ ဒူးခေါင်းလောက်မြုပ်သွားရင် လှုပ်လေမြုပ်လေပဲဖြစ်လ်ိမ့်မယ်။
ဘရိန်းဒရိန်း တို့ဘာတို့ဆိုတာက နိုင်ငံတခုလုံး လူထုတခုလုံးကို ခြုံငုံစီမံရသူတွေ စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်။
တကယ်က ပန်ပန်တို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ခေါင်းသေးသေးလေးတွေနဲ့ လေထွားကြတာပါ
ဆီမထွက်တဲ့ ကျောက်ခဲတုံးကြီးမဖြစ်အောင်လည်း ဂရုစိုက်ပါ့မယ်ရှင့်
အဆိုပါ စာစုအတွက် အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဗျ….
ကွန့်မန့်မှာ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အစိုးရ၀န်ထမ်းတချို့တွေ ခြစားမှုတွေဖြစ်လာနေတာ … အဲ့ဒီ လစာ မလုံလောက်တာကနေ စတော့တာပါပဲ … ။ လစာသာ လုံလုံလောက်လောက်ပေးကြည့် … လာဘ်ယူပြီး လုပ်တဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ … ရှက်စရာလို့ မြင်လာလိမ့်မယ် ။
အခုအချိန်တော့ ဆုပ်လည်းစူး စားလည်းရူးဆိုသလိုဖြစ်နေတော့တာပေါ့ ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အစိုးရအလုပ်ဆိုလျှင် လျှောက်ရလည်း မလွယ်ကူသလို ၊ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်မှုကလည်း … သမာ သမတ်ရှိတယ် … ။ နောက်ပြီး ခံစားခွင့်နဲ့ လစာကလည်း အပြင်ကုမ္ပဏီတွေထက်သာတော့ …. အစိုးရအလုပ်မှာ လစ်လပ်နေရာရှိလျှင်ပဲ … လိုလိုချင်ချင် ၀ိုင်းတိုးနေကြတာ … ။ အစိုးရအလုပ်လုပ်မှ ဂုဏ်ရှိတယ် ထင်ကြတယ် … ။ ဒီမှာတော့ ရုံးအလုပ်ထက် ..အပြင်အလုပ်တွေမှာ လုပ်ချင်သူများတယ် .. ။ ရုံးမှာ လုပ်သူက … ဂွင်ရှိတဲ့ နေရာကိုမှ ၀င်ချင်တယ် … ။ တခြားနိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရအလုပ်ကို ဂုဏ်ရှိတယ်ထင်ပြီး လိုလိုလားလားကို လုပ်ချင်တာ .. အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကွာတယ်ပေါ့လေ … ။
ပြောရလျှင်ပန်ပန်ရေ … အစ်မတို့ ဘယ်အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်ပါသူများ လက်အောက်ကမို့ … သိပ်ပြီး ထူးမခြားနားပါပဲ … ။ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လေးလုပ်နိုင်လျှင်တော့ ….. သေရင်မြေကြီး ရှင်လျှင်ရွှေထီးလုိ့ မှန်း လို့ ရတာပေါ့လေ ….. ဟူးးးးးးးးးးးးးးးး ရင်ထဲ ကျလိရုံတင်မကဘူး စိတ်ပါမောသွားပြီ ….
မချမ်းသာရင်နေပါစေလေ၊ စားချင်တာလေးစားနေရရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ
ဟိုဟာလေးဝယ်စားဖို့လည်း ရှေ့နောက်စဉ်းစားစရာမလို၊ ဒီဟာလေးလည်း ဖက်ခနဲဝယ်စားနိုင်ရင် ကျေနပ်စရာတစ်ခုပါပဲ
သများတို့တော့ စာမေးပွဲအောင်ရင် ရတာပါပဲ
မွန်မွန်ကတော့ အစိုးရအလုပ်ကို အစကတည်းက စိတ်မ၀င်စားခဲ့တာ။
အလုပ်ရဖို့အတွက် ပိုက်ဆံလိုက်ရတယ်။ ပိုက်ဆံပေးလိုက်ရင် အလုပ်ရတယ်။ ကိုယ်က အလုပ်ဝင်ပါပြီတဲ့။ ကိုယ့်အထက်ကလူက ပိုက်ဆံပေးထားတဲ့၊ အရည်အချင်းမရှိတဲ့သူဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားနေပါစေ..မဖားတတ်ရင် ရာထူးတက်ဖို့မမြင်..
နောက် အဲဒီ စစ်စတမ်ဆိုတာလား..ဘာလား… အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ စားပွဲခုံတစ်လုံးနဲ့.ကွန်ပျူတာမရှိ၊ ဘာမရှိတဲ့..ဟိုး..ဗီဒိုထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ နှစ်ဆွေးစာရွက်တွေ တစ်ထပ်ကြားထဲမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ကို ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားခဲ့မိဘူး… အာမခံချက်ရှိတာ မရှိတာတွေလည်း မသိဘူး။
ကိုယ်တောင် ဒီလို ပေးရကမ်းရ၊ လာဘ်ထိုးရတာတွေ မလုပ်ချင်တာ..သူများတကာရဲ့ မသထာရေစာလည်း မစားချင်ဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းပင်ပန်း အပြင်မှာပဲ လုပ်တယ်။
ကျုပ်လည်း အဲဒီလိုအကြပ်အတည်းမျိုး ကြုံခဲ့ဖူးတယ်…
အိမ်ရှင်မတစ်ယောက် မီးဖိုးချောင်မှာထမင်းဟင်းချက်တာတောင် နိုင်ငံ့အရေးလို့ပြောရင်ရမလားမသိ
ကျမကတော့ ကိုယ်ရှာတာမှ ကိုယ်မသုံးရရင် ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ဘူးလို့မြင်တယ်။ မိသားစုကိုပေးကမ်းထောက်ပံ့ရလို့ မသုံးရတာက ပြသနာမရှိဘူး အချိန်တန်ရင် ကိုသုံးရမဲ့အလှည့် ရောက်လာမှာဘဲ။ နောက်ပြီးဘယ်သူမဆို တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းရှာကြမှာဆိုတော့ ၀င်ငွေကလဲ ဒီအတိုင်းနေမှာမဟုတ်ဖူး တိုးလာအုံးမှာ။ ဆိုလိုတာက ကို့ဘ၀အတွက် ကို့မိသားစုအတွက် risk တခုတော့ယူသင့်တယ်လို့မြင်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိနေရင် လမ်းမလွဲအောင်ကြိုးစားဖို့ဘဲလိုတာ။ စဉ်းစားလွန်ပြီး ရှေ့မရောက်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေအတွက် နောင်တ၇နေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ (ကိုပိုင်အမြင်ကို ချပြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်စေလိုကြောင်း)
ထွက်လို့မရအောင် လျော်ပေးဘို့ ကြေးကြီးကြီးနဲ့စာချုပ်ထားတယ်